खुसीको खबर – अन्तत चीनको इन्टरनेट सञ्जालसंग जोडियो नेपाल, तोडियो भारतीय एकाधिकार « Sajha Page
October 20, 2018 Sat
खुसीको खबर – अन्तत चीनको इन्टरनेट सञ्जालसंग जोडियो नेपाल, तोडियो भारतीय एकाधिकार
प्रकाशित मिति: January 10, 2018
काठमाडौं, २६ पुस । अन्ततः नेपाल चीनसँगको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको छ । नेपाल टेलिकम चीनसँगको क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकसँग जोडिएसँगै नेपालमा भारतीय इन्टरनेट एकाधिकार तोडिएको छ ।
इन्टरनेटमा जोडिने भाका पटक-पटक भाका सार्दै आएको नेपाल टेलिकमले अन्ततः चीनसँगको अन्तरदेशीय इन्टरनेट लिंकको सफल परीक्षण गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत रं नेपालका लागि चिनिया राजदुत यु होङले संयुक्तरुपमा शुक्रबार यो नेटवर्कको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् ।
केही हप्ता भएको परीक्षण सञ्चालन सफल भएपछि व्यवसायिक रुपाम नै सञ्जालमा आवद्ध हुने तय गरिएको छ । संविधान बनेपछि भएको भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनबाट इन्टरनेट ल्याउने योजना बनेको थियो ।
रसुवागढी नाका भएर नेपालमा चीनको इन्टरनेट सञ्जाल जोडिएको हो । यसअघि झण्डै एक वर्षअघि नै चीनबाट इन्टरनेट ल्याउने भनिएको थियो । तर, इन्टरनेटलाई चिनियाँ क्षेत्रमा हिउँले अवरोध सिर्जना गरेपछि तोकिएकै मितिमा सम्भव भएन ।
अघिल्लो वर्षको जाडो महिनाभर चीनतर्फ बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने भएको इन्टरनेटको अप्टिकल फाइबर बाक्लो हिउँले पुरिएको थियो ।
हिउँले प्रभावित क्षेत्रबाट आउने अप्टिकललाई चीनले रि-रुटिङ गर्दै नेपाललाई इन्टरनेटमा भारतीय परनिर्भरताबाट विकल्प प्रदान गरेको छ । पहिरोमा फसेको ३ किलोमिटर अप्टिकल रुटलाई रि-रुटिङ गरेर नेपाल इन्टरनेट मार्गमा नयाँ विकल्प तयार गरेको हो ।
चीनबाट इन्टरनेट ल्याउने गरी व्यावसायिक सम्झौता भएको १ वर्षपछि चिनियाँ इन्टरनेट नेपालसँग जोडिएको हो । नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई स्थनीय केबुलमार्गबाट जोड्न नेपाललाई आइपी सर्भिस उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
अब नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबल अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएका छन् । चीनबाट आउने इन्टरनेट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा जोडिसकेपनि शुक्रबार त्यसो औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम तय भएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
चिनियाँ इन्टरनेट टेलिकाको केन्द्रीय नेटवर्कमै जोडिएर उपभोक्तामाझ पुग्नेछ । ब्यवसायिक रुपमा भारतीय सेवा प्रदायकसँग भन्दा चीनबाट किनिएको इन्टरनेट लिंक थोरै महंगो हुनेछ ।
तर, चीनमार्फत तेस्रो मुलकका सेवा प्रदायकसँग जोडिने मौका भने यसबाट मिल्नेछ । अब हङकङसँग इन्टरनेटमा आवद्ध हुन पनि यसले सहयोग गर्नेछ ।
चीन हुँदै टेकिलमको इन्टरनेट नेटवर्क अब हङकङसम्म नै जोडिएको छ । टेलिकमले भारतका टाटा, एयरटेल, बीएसएनएल, भारत पन्जाव र रिलायन्सबाट २२ जीबी भोल्युमको इन्टरनेट ल्याइरहेको छ । चीनसागको आवद्धतापछि भारतको इन्टरने नेटवर्कमा एकाधिकार सकिएको छ ।
चीनसँग स्थल मार्ग हुँदै फाइबर जोडिएकाले अब सो क्षेत्रबाट पनि अन्य देशका सेवा प्रदायकसँग जोडिन सहज हुने अपेक्षा छ । भारत हुँदै प्रयोग गरिएको रुट बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीको लागि यो अर्को महत्वपूर्ण विकल्प हो ।
चीनसँगको इन्टरनेट आवद्धताले अप्ठेरा परिस्थितमा पनि नेपाललाई विकल्पहरु प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकम भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट भारतका विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग जोडिएकोमा अब चिनियाँ बाटोबाट समेत इन्टरनेटमा आवद्ध भएको छ ।
चाइना टेलिकमले भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने र सो रुटमार्फत नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रुपमा स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
चाइना टेलिकमले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो रुट विस्तार कार्य गरिरहेको छ । चीनले टेलिकमलाई अत्याधुनिक सुविधासहितको रुट प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।
अहिले सम्मकै देश भक्ति भावनाले भरियको फरक गीत जुन गित सर्बाधिक चर्चा बटुल्दै छ(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक, केही मिनेटमै जानेछ २० लाख निर्दोष मानिसको ज्यान, ७० लाख बढी घाइते !
किसमिसमा लुकेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी अदभूत रहस्य, जान्नुहोस
आदिवासी जनजातीले यसकारण दशैँ नमनाउनु ! दशैँ नजिकिदै गर्दा नेता आङकाजी शेर्पाले फेरी लेखे सनसनीपूर्ण फेसबुक स्टाटस (स्टाटस सहित)
स्वार्गीय दिदिलाई हत्यारा भाइको पत्र !
अब देखि बहालमा बस्नेलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाउने, आफैलाई चाहियो भनी हटाए अरुलाई घरधनीले राख्‍न नपाउने कानुन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण
माटो बिना नै छतमा साग सब्जी फलाउने अनौठो प्रविधि, आम्दानी वार्षिक २ लाख बढी
चाईनिज गायिकाले गाएको लोक दोहोरी गित नेपालमा भाईरल हेर्नुहोस विडम्बना उनको हालै कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ (भिडियो सहित)